Ilaha xogta oo dhan waa meel kasta, laakiin iyaga oo u adeegsanaya cilmi-baaris bulsheed waxay noqon kartaa mid khatar ah. Fikradahayga, waxaa jira waxyaabo sida "qadada lacag la'aanta ah" ee xogta: Haddii aanad gelin shaqo badan oo ururineysa, markaa waxaad u maleyneysaa inaad ku qasban tahay in aad shaqo badan ku fekerto falanqaynta.
Ilaha xogta waaweyn ee maanta - iyo laga yaabee berri - waxay u muuqdaan inay leeyihiin 10 dabeecadood. Saddexdani guud ahaan (laakiin had iyo jeer maaha) waxtar u leh cilmi-baarista: weyn, marwalba, iyo aan firfircoonayn. Toddoba guud ahaan (laakiin had iyo jeer ma ahan) dhibaatooyin cilmi-baaris: dhammaystirnaanta, aan la heli karin, aan shukaansanayn, qulqulaya, algorithmically confounded, wasakh, iyo xasaasiyad. Qaar badan oo ka mid ah sifooyinkaasi ugu dambeyntii waxay soo baxaan sababtoo ah ilaha macluumaadka weyn lama abuurin ujeedada cilmi baarista bulshada.
Iyada oo ku saleysan fikradaha cutubkan, waxaan u maleynayaa in ay jiraan seddex siyood oo muhiim ah oo ilaha xogta waaweyni ay noqon doonaan kuwa ugu qiimo badan cilmibaarista bulshada. Marka hore, waxay awood u yeelan karaan in cilmi-baadhayaashu ay go'aan ka gaaraan inta u dhaxaysa saadaasha aragtida. Tusaalooyinka noocan ah waxaa ka mid ah Farber (2015) (darawallada New York Taxi) iyo King, Pan, and Roberts (2013) (faafreebka Shiinaha). Second, ilaha xogta waaweyn ayaa suurta gelin kara cabbirada wanaajinta ee siyaasadda illaa iyo hadda. Tusaale ka mid ah shaqada noocan ah waa Ginsberg et al. (2009) (Isbeddellada Google Flu). Ugu dambeyntii, ilaha xogta waaweyn ayaa caawin kara cilmi-baarayaashu inay sameeyaan qiyaaso sababo iyada oo aan la marin tijaabooyin. Tusaalooyinka noocan oo kale ah waxaa ka mid ah Mas and Moretti (2009) (saameynta isku Einav et al. (2015) wax soo saarka) iyo Einav et al. (2015) (saameynta bilawga bilawga ah ee dalxiiska ee eBay). Mid kasta oo ka mid ah hababkan, si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan tahay in cilmi-baadhayaashu ay wax badan u keenaan xogta, sida qeexidda tiro tiro ah oo muhiim u ah qiyaasta ama laba aragtiyo ka dhigaya saadaalinta tartanka. Sidaa darteed, waxaan u maleynayaa habka ugu fiican ee looga fekerayo waxa ilaha xogta waaweyn ee uu sameyn karo waa inay caawin karaan cilmi-baarayaasha weydiin kara su'aalo xiiso iyo muhiim ah.
Ka hor intaan la soo gabagabeyn, waxaan u maleynayaa in ay tahay qiimo la tixgelinayo in ilaha xogta waaweyn ay saameyn muhiim ah ku yeelan karaan xidhiidhka ka dhexeeya xogta iyo aragtida. Ilaa hadda, cutubkani wuxuu soo qaatay habka ay udub-dhexaadka ah ee cilmi-baariseed. Laakiin ilaha xogta waaweyn ayaa sidoo kale u suurtageliya cilmi-baarayaasha in ay sameeyaan xoojin xoog leh . Taasi waa, iyadoo loo eegayo taxadar qoto-dheer oo ah xaqiiqooyin macquul ah, qaabab, iyo baaritaan, cilmi-baarayaashu waxay dhisi karaan aragtiyo cusub. Taas beddelkeeda, xogta koowaad ee horudhaca aragtida cusub ma aha mid cusub, waxaana ugu xoog badnaa Barney Glaser iyo Anselm Strauss (1967) iyaga oo ku baaqaya aragti aasaasi ah . Si kastaba ha ahaatee, qaabka ugu horeysa ee xogta, hase yeeshee, micnaheedu maaha "dhammaadka aragtida," sida laga soo xigtay qaar ka mid ah wargeysyada ku saabsan cilmi baarista da'da digital (Anderson 2008) . Taas beddelkeeda, sida jawiga xogta isbeddelayo, waa in aan ka rajeynaa dib-u-habeyn lagu sameeyo xiriirka ka dhexeeya xogta iyo aragtida. Dunida oo ururinta xogtu ay qaali ahayd, waxay macno u noqotay in ay ururiso xogta kaliya ee ay soo jeedinayaan inay noqon doonaan kuwa ugu faa'iido badan. Laakiin, aduunka oo ah xog aad u tiro badan ayaa horay loo heli karaa bilaash, waxaa macquul ah in lagu tijaabiyo habka xogta koowaad (Goldberg 2015) .
Sida aan ku tusay cutubkan, cilmi baarayaashu wax badan ayey wax ku baran karaan iyaga oo daawanaya dadka. Saddexda cutub ee soo socota, waxaan ku sharxi doonaa sida aan wax u baran karno waxyaabo badan oo kala duwan haddii aan ku habboonayno ururinta xogtayada oo aan ula macaamilno dadka si toos ah iyaga oo waydiinaya su'aalaha (cutubka 3), tijaabooyinka tijaabada ah (cutubka 4), iyo xitaa ku lug leh nidaamka cilmi-baarista si toos ah (cutubka 5).